Ny Teny fahafito: Aza mijangajanga
"Aza mijangajanga." Eksodosy 20:14
"Fa Izaho (Jesosy) kosa milaza aminareo fa izay rehetra mijery vehivavy hila azy dia efa nijangajanga taminy tam-pony sahady." Matio 5:28
Ny kolontsaina goragora eo amin’ny fiaraha-monina dia manamaivana ny fijangajangana (firaisana ara-nofo ataon’olona manambady amin’olona hafa noho ny vadiny). Matetika izany no heverina fa fiainan’ny tsirairay manokana, ka tsy tokony hidiran’ny hafa. Manampy izany koa moa ny fandraisana ny firaisana ara-nofo ho zavatra «mandeha ho azy», ka mampanadino fa ny firaisana ara-nofo dia mampiditra ny maha olona manontolo, izany hoe ny vatana, fanahy, saina, ary mahakasika ny aina.
Tamin’ny «toriteny teo an-tendrombohitra» Jesosy dia namaritra ny fijery mitsiriritra hoe anisan’ny fijangajangana. Tsy izay ataontsika ihany no antsoina hoe fijangajangana, fa koa ary indrindra izay ao am-pontsika.
Maro ny antony mitarika ho amin’ny fijangajangana : ny vesatry ny maha irery, ny fifampizarana sy fifampiresahana zara raha misy eo amin’ny mpivady, ny fikatsahana fahafinaretana samirery sy mihoa-pampana… Nefa na oviana na oviana ny fijangajangana dia tsy mamaha ireo olana mitranga eo amin’ny mpivady. Vao mainka aza izany miteraka fahoriana sy fijaliana, ho an’ny ankohonana manontolo. Ary indrindra, rehefa mijangajanga dia manota amin’Andriamanitra, Izay namorona io firaisana io ho an’ny mpivady, ary koa manimba ny asany.
Tsy fara tanjona tsy akory ny fahafinaretana, fa tokony hifamatotra amin-javatra lehibe kokoa, dia ny fiombonan’ny mpivady. Loharanon’ny fahafahana miombona ny firaisan’ny fo, indrindra fo samy mifamatotra amin’ny Tompo, ny fandraisana, ny teny, ny fihainoana, ny fifanoloran’ny mpivady.
Manana hery ny Tompo hanasitrana ireo fifandraisana, izay tena mora maratra, eo amin’ny mpivady. Te hanome hery hamelana heloka Izy, te hanome hery hiainana fiainam-baovao ao anaty fitiavana velona sy mifamaly, sady tsy mitsaha-mitombo.